China ijeli slipper ifektri abakhiqizi | UHuanyi
amasokisi okwelapha abandayo
Ama-slippers we-gel asetshenziswayo asebenzayo, ukwelashwa ngokushesha kweqhwa kwezinyawo ezikhathele futhi ezivuvukile, izinyawo ezishisayo, ukukhululeka ebuhlungwini be-neuropathy obubangelwa yisifo sikashukela kanye nokwelashwa ngamakhemikhali.
Yenziwe ngendwangu ye-premium, ama-slippers ethu asebenzayo asebenziseka kalula futhi i-gel yokupholisa ifakiwe kuwo wonke ngezansi nangaphezulu okugcwele kwama-slippers wokupholisa okuqhubekayo konyawo.
imboni ihlolwa yi-BSCI, imikhiqizo yethu iqinisekiswe yi-SGS, CE, FDA.
Ifektri ihlolwa yi-BSCI, imikhiqizo yethu iqinisekiswe yi-SGS, CE, FDA.
Iminyaka eyi-10 Isipiliyoni se-OEM, i-ODM. Ingakunika iziphakamiso zobungcweti ngombala owenziwe ngokwezifiso, ilogo, amaphakheji, ukusiza ukuthuthukisa isisombululo esihle kakhulu semikhiqizo yokusiza yezinhlungu ebandayo yepakethe.
Kulabo abandayo be-gel slippers, ifektri yethu inezinhlobo ezahlukene zosayizi nemibala, ngokwesibonelo i-ice blue, navy blue, pink, black.
Xhumana nathi ukuthola izinhlu zamanani zakamuva!
Kulula Sebenzisa I-Cold Therapy Gel Slippers Yokunakekelwa Kwezinyawo:
Ilula futhi isebenza kahle, ama-slippers ethu okupholisa ama-gel slippers ayisixazululo esihle sokwelapha ekhaya kubanda ukufeza ukukhululeka ngemizuzu, ungafaka imibala ehlukile yelinye ilungu lomndeni, ukujabulela ukuphumula ndawonye.
1.Ingabe imikhiqizo yakho iphephe ngokwanele ukugcina ukudla noma umzimba womuntu?
Yonke impahla yethu ye-PVC, PE, Nylon, Lycra, Gel ayinabuthi nge-FDA, MSDS, CE imibiko.
2. Yini i-MOQ yakho?
Ngokuvamile i-MOQ ivamise ukubhangqwa ngama-1000 noma ama-2000. Uma kunesidingo sinendwangu yesitoko kanye nebhande, singabonisana ngokuya ngesimo ukuze sinikeze ukusekelwa okuhle kakhulu kwamakhasimende ukuze avivinye imakethe
3. Kuyini ukuphrinta kwakho?
Singenza ukuphrinta kwesilika kwesikrini, ukuphrinta nge-offset, ukuphrinta kwe-UV noma ukufaka izitika. Sizokhetha izindlela zokuphrinta ezifanele wena ngokwedizayini yakho.
khokha inani lama-30% ngemuva kwama-oda aqinisekiswe yi-T / T. Singamukela i-L / C ngokuya ngobuningi be-oda.
5. Ungakwazi yini ukunikeza amasampula wamahhala?
yebo 1-3 ucezu amasampula wamahhala wakho ngenkathi kuthathwa impahla. Uma kunesidingo sokwenza ngokwezifiso i-logo yakho noma ukuma kwakho, sidinga ukuxoxa ngemali yamasampuli ngokuya ngezindleko zokuphrinta noma zemodeli.
Langaphambilini isihlakala ukugoqa neqhwa iphakethe
Olandelayo: Amasokisi Okwelapha Okubandayo Okunakekelwa Kwezinyawo
Khipha ku-internet Ice Pack For Foot
Ukupholisa amaGel Foot Pads
Unyawo Namaqatha Ice Pack